Home विचार / दृष्टिकोण मंगोलहरुको स्वाभिमान किन जाग्दैन ?
“गद्दारले धोका दिन्छ, कायरले घुँडा टेक्छ, बीरहरु लड्छन् र इमान्दारहरु अघि बढ्छन् ।” होचिमिन्ह । आहा ! सुन्दै हामी कति बीर, हेर्दै कति बीर जस्तो । हुन पनि हामी पराक्रमी बीर रावणका सन्तान । बुद्ध जस्तै शान्त हामी भित्रको अत्यन्त नम्रता र इमान्दारिता । लाग्छ हामी कतै मूर्ति जस्तै । आफ्नै निम्ति केही नगर्ने, आफ्नै आँखा अगाडिको नदेख्ने, कति बुद्धु छौं । हाम्रो स्वाभिमान मरेको छ । इतिहासले चिहानमा गाडेको छ । हामी मंगोललाई हाम्रो कंकाल, अस्थिरपञ्जर उत्खनन गरी निकालेको अवस्था भए पनि पूर्णरुपमा ज्यूँदो मंगोल हुन सकिरहेका छैनौं । हामी विशाल हृदय भएर विशाल सोच दुरदर्शीता नअपनाउने मानवरुपी कंकाल मात्र हौं । वर्तमान नेपालको राजनीतिक परिवर्तन सामाजिक, विभिन्न पाटोलाई नियाल्दा लाग्छ, हामी अझै निन्द्रामा छौं । हाम्रो स्वाभिमान जागेको छैन । हो, हामी मंगोलहरुको स्वाभिमान किन जान्दैन ? हामी मंगोलहरु केही गर्न नसक्ने हामी मंगोलहरु केही गर्न नसक्ने लाचार हौं ? बाहुन क्षेत्री शासक वर्गले यस्तै शैलीमा प्रचार गरेका छन् । यस्तै व्यवहार गरिरहेका छन् । त्यसलाई प्रतिकार गर्ने आफ्नो स्वाभिमानको निम्ति बिरता प्रस्तुत गर्न असक्षम हौं ? “न निगले बने न उग्ले” भन्ने कथन चरितार्थ उद्घाटित भइरहेको छ । गद्दारहरु कायरहरु सुरक्षित ठाउँमा बसेर हाम्रो स्वाभिमानलाई धज्जी उडाइरहेका छन् ।